China Taper Roller Bear 30200 Series နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ရီ Xinyan
သံမဏိတိုင်ခေါင်းအုံး Block ကိုထမ်းရွက်
Thermoplastic ခေါင်းအုံး Block သံမဏိဝက်ဝံ
တွန်းကန်အား Ball ကိုဝက်ဝံ
လူပျို Row ဆလင်ဒါ Roller ဝက်ဝံ
နှစ်ချက် Row Cylindrical Roller Bear
ထောင့်ဆက်သွယ်ရန် Ball ကိုဝက်ဝံ
Ucp စီးရီး Bearing ခေါင်းအုံး Block ကို
နက်ရှိုင်းသော groove Ball Bearings 6000 စီးရီး
အလင်းဆုံကြိတ်စက်ဝက်ဝံ 22200 စီးရီး
Taper Roller Bearing 30200 စီးရီး
သီးခြားတပ်ဆင်နိုင်သည့်အတွင်းပိုင်းလက်စွပ်၊ roller၊ ဤသို့သော ၀ န်ဆောင်မျိုးသည် radial load နှင့် axial load ကိုထောက်ပံ့သည်။ tapered roller bearing သည် one-way axial load ကိုသာသယ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆန့်ကျင်ဘက် axial load ကို transfer လုပ်ရန်အချိုးကျ tapered roller bearing ကို install လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ဤရွေ့ကားမျိုးကိုကြင်၏ကော်လံအရေအတွက်အရသိရသည်တစ်တန်း, နှစ်တန်းနှင့်လေးတန်း tapered roller bearing များပါဝင်သည်။ တစ်ခုတည်းအတန်း tapered roller bearing ၏ရှင်းလင်းရေးတပ်ဆင်စဉ်အတွင်းညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်နှစ်တန်းနှင့်လေးတန်းပါပါလာသည့် roller bearing များရှင်းလင်းခြင်းသည်အသုံးပြုသူများလိုအပ်ချက်အရညှိနှိုင်း။ လိုအပ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် radial load ပါဝင်သောပေါင်းစပ်ဝန်ကို support လုပ်ရန် Taper roller bearing ကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့၏ခွက်များသည်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ရန်သီးခြားစီဖြစ်သည်။ andd ကိုအသုံးပြုနေစဉ် radial clearance နှင့် axial clearance တို့ကိုချိန်ညှိနိုင်ပြီး preload mounting ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
tapered roller bearings များကိုမော်တော်ကား၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ သတ္ထုတူးဖော်ခြင်း၊ သတ္တုဗေဒ၊
ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းနိုင်သောမော်ဒယ် - မက်ထရစ် - ၃၀၂၀၀၊ ၃၀၃၀၀၊ ၃၁၃၀၀၊ ၃၁၀၀၀၊ ၃၂၂၂၊ ၃၂၃၀၀၊ ၃၃၀၀၀၊ / လက်မ: JL, JLMS, LS, LM, LMS, က MS, HMS စီးရီး။
သင်၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောရည်ညွှန်းမှုအတွက်အခြားစီးရီးများပါသည့် Taper roller:
* စက်မှုထုပ်ပိုး + အပြင်ပုံးများ၊
* sigle box ကို + အပြင်ဘက်ပုံး + pallets
* Tube အထုပ် + အလယ်သေတ္တာ + အပြင်ဘက်သေတ္တာ + pallets
၁။ သင်၏ကုမ္ပဏီ MOQ သည်မည်မျှရှိသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ MOQ 1pcs ဖြစ်ပါတယ်။
2. သင် OEM ကိုလက်ခံနှင့်စိတ်ကြိုက်နိုင်မလား?
ဟုတ်သည်၊ OEM ကိုလက်ခံပြီးနမူနာသို့မဟုတ်ပုံဆွဲခြင်းအရသင့်အတွက်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် stock ၌ကြီးမားသော၊ အလတ်စားနှင့်အငယ်စားအလေးများရှိသည်။ သို့သော်ကြီးမားသော bearing များသည်အားသာချက်ဖြစ်သည်
ရှေ့သို့ UC စီးရီး
နောက်တစ်ခု: နက်ရှိုင်းသော groove Ball Bearings 6200 စီးရီး
tapered roller တွန်းကန်အားဝက်ဝံ